छोराछोरीको परीक्षाको परिणाम आएको दिन अभिभावकले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आठ कुरा आफ्ना सन्तानको स्वभाव र मनस्थितिबारे अभिभावकहरू परिचित हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ उनीहरू सतर्क हुनुपर्छ। तनाव उच्च हुने सम्भावना भएका बेला अभिभावकहरू चनाखो हुनुपर्छ। छोराछोरीको परीक्षाको परिणाम आएको दिन कसरी व्यवहार गर्ने त? मंगलबार, असोज ७, २०७६
बच्चामा मोटोपनको समस्या: आमाबुबाले के मा ध्यान दिने ? ब्रिटेनका बालबालिकासम्बन्धी स्वास्थ्यविद्ले उनीहरूलाई खानेकुराबारे बेलैमा सिकाउन सकेमा बालबालिकालाई दीर्घकालीन फाइदा मिल्ने पाइएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ। बुधबार, साउन २९, २०७६
जाडोमा बच्चा स्याहार गर्ने १४ टिप्स १. जाडोयाममा बच्चालाई धेरै समस्या देखिने भएकाले सरसरफाइसहित विभिन्न कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। आइतबार, पुस २२, २०७५
बच्चा हुर्काउँदा आमा–बुबाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? के–के कुरामा ध्यान दिने? हाम्रो जस्तो संस्कार भएको समाजमा बच्चा जन्माउँदा आमाबुबा मानसिक रूपमा तयार भएको पाइँदैन। कुनैकुनै समाजमा छोराछोरीमा अझै पनि विभेद हट्न सकेको छैन। आइतबार, भदौ ३, २०७५
किशोर–किशोरीहरू बुवाआमालाई किन एलर्जीको रूपमा लिन्छन्? समय परिवर्तनशील छ। उमेर बढेसँगै मानिस पनि एकै रहिरहन सक्दैन।चरणबद्ध रूपमा मानिसको स्वभाव तथा आयामहरूमा भिन्नता आउनु स्वाभाविक हो। मंगलबार, वैशाख १८, २०७५
बाल्यकालको व्यायामः क्यान्सरको जोखिम कम अध्ययनले बाल्यकाल र किशोरावस्था हाम्रा शरीरका हाडको विकास तथा वृद्धि हुने समय भएकाले यसबेला गरिने व्यायामले अधवैंशे उमेरमा समेत स्वस्थ रहन सघाउने पत्ता लगायो। आइतबार, फागुन २०, २०७४
बालबालिकामा बानीव्यहोराका समस्या समग्रमा बच्चादेखि किशोरकिशारीसम्म थुप्रै सामान्यदेखि जटिलसम्म व्यवहारगत तथा मानसिक समस्या देखिन सक्छन्। यी समस्याले अभिभावकमा तनाव त ल्याउँछ नै, बच्चाको भविष्यमा पनि प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। मंगलबार, कात्तिक १७, २०७२